Ikati yentlanzi: iimpawu, ukondla kunye nokhathalelo lwale ntlanzi | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Intlanzi
Namhlanje siza kuthetha malunga neentlobo ezithandwayo zasemanzini, kuba kukho iintlobo ngeentlobo zezinto eziphilayo kunye neempawu zazo ezizodwa ezibenza babe nomtsalane njengezilwanyana zokuhombisa. Imalunga nekatfish.
Ngaphandle kokuba zizilwanyana ezimibalabala nezinomdla, badlala indima ebalulekileyo kwindalo ephinda yenziwe ngaphakathi emanzini. Kwaye enye ikatfish icoca ezantsi emanzini (batya ukutya okuseleyo). Ngale ndlela, ukutya kuthintelwa ukuba kungaboli kwaye konakalise umgangatho wamanzi. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi nge catfish?
1 Izinto ngokubanzi
2 Iimpawu zeCatfish
3 Ukuhanjiswa kunye nendawo yokuhlala
4 Ukuziphatha kunye nokondla
6 Ukuveliswa kwakhona
7 Eyona catfish ilungileyo kwi-aquarium yakho kunye nexabiso
Kukho iindidi ngeendidi zeekati, nokuba ngamanye amaqela aneeswitshi kumlomo womlomo (osapho lwe-loricarid). Umlomo womlomo ivumela ukubambelela kwiindonga ze-aquarium kwaye uzicoce, Ke ikatfish inokufezekisa imisebenzi emibini yokucoca, enye yezantsi kunye nezinye iindonga.
Kukho inani elikhulu leesiluriformes ezisebenzisa ubulembu. Oku kuluncedo olukhulu ukuba kwi-aquarium yethu sinobumba bendalo obukhula ngokukhawuleza okukhulu. Ngale ntlanzi siza kunceda ukulawula abantu abalinganiswa kwaye une-aquarium enemeko encinci.
Nangona i-catfish inceda kakhulu kulondolozo lwe-aquarium, oko akuthethi ukuba akufuneki ukuba siyenze ngokwethu imisebenzi yolondolozo.
Uninzi lweempawu zeecatfish ezikhoyo zezakho kumyalelo weSiluriformes. Babizwa ngokuba yikatiba kuba banentshebe emilenzeni emilonyeni yabo efana neentshebe zeekati. Ezi ndevu zibizwa ngokuba zii-barbel filbular. Kukho iintlanzi ezinazo phantsi komlomo okanye kwimpumlo uqobo. Njengakwiikati, ezi ntambo zisetyenziswa njengelungu lemvakalelo, ukufumanisa ngokulula ukutya abaza kukutya.
Emizimbeni yabo zineentsiba ezibukhali nezirhoxiswayo ngaphambili komphambili wazo wangaphambili kunye wepectoral. Ezi zihlambo ziluncedo kakhulu kwindalo yendalo xa zihlaselwa luhlobo oluthile lwerhamncwa. Ukongeza, kumachibi ale miqolo banamadlala anetyhefu abanokuthi bawathumele kwixhoba labo. Kuxhomekeke kuhlobo lwe-catfish esiyibonayo, banokuba okanye bangabinayo le miqolo. Kuzo zonke izinto ezivelayo, iintlobo zalahleko.
Uphawu olukhethekileyo lwe-catfish kukuba inalo ulusu oluqinileyo kakhulu kwaye alunazikali. Kukho amaqela athile aneepleyiti zesikhumba ezisebenza njengesixhobo sokukhusela ekuhlaselweni ngamarhamncwa. Esi sikrweqe siguqukile satshintsha indawo yesikali.
Ukuhanjiswa kunye nendawo yokuhlala
Uninzi lweekati luhlala emanzini acocekileyo, nangona kukho amanye amaqela ahlala kwiingqaqa zekorale kwizinto eziphilayo zaselwandle. Baye babonwa nakwamanye amachweba amanzi amtyuba.
ICatfish isasazwa kwihlabathi liphela ngaphandle kweAntarctica. Okwangoku kuqikelelwa ukuba inani leentlobo lidlula ngaphezu kwamawaka amabini eentlobo.
Ukuziphatha kunye nokondla
ICatfish ihlala ichitha ixesha elininzi emazantsi e-aquarium yokutya. Phantse zonke ziba sebusuku, nangona kukho amaqela athile, anjengee-locarids eziguqukayo kwaye zinxulumene nezinye iintlanzi ezinje nge-corydoras.
Ukutyisa iCatfish kwahluka kakhulu, nangona zohluke kakhulu kuxhomekeke kwiqela esinalo. Amanye amaqela ezi ntlanzi atya kakhulu ezinye, ezinye zikhetha ezinye izilwanyana ezingenamqolo zasemanzini, ezinye zondla ezinye iintlanzi, kwaye kukho neekati ezondla nge-zooplankton.
Kwinto eza kuba kukuziphatha kwezi ntlanzi ngokubhekisele kwezinye onokuba nazo etankini, kuya kufuneka uyikhumbule loo nto catfish parasitize ezinye iintlanzi (usapho lweTrichomycteridae).
Xa uthenga i-catfish ye-aquarium yakho kubalulekile bazi amasiko efanayo ukulungiselela i-aquarium ngandlela thile. Gcina ukhumbula ukuba imikhwa iyahluka kakhulu kuhlobo ngalunye. Ke ngoko, zombini morphology yangaphakathi kunye netanki leentlanzi kufuneka zihambelane neentlobo zeecatfish esiza kuzazisa ngazo.
Uninzi lwazo lufuna izingodo kunye nezinye izixhobo ukuze zikwazi ukufihla. Ezinye iintlobo zifuna ukukhanya okuncinci. Ngokuphathelele ukutya, kuya kufuneka uyazi ukuba luhlobo luni na kwaye lwalusondliwa njani ngaphambili, ezinye zizinto ezitya inyama, ezinye zitya utyani kwaye uninzi lutya zonke iintlobo zokutya (omnivores). Kule meko sinokufumana kwiivenkile ezininzi zokugcina ukutya kwekatfish ezilungeleleneyo kwaye ziluncedo olukhulu ekugcineni iintlanzi.
Ngezantsi kwe-aquarium kuyacetyiswa ukuba unayo Isakhiwo esihle ukuze bakwazi ukuziqhelanisa kakuhle nemvelaphi. Kuya kufuneka silibale ukuba ezi ntlanzi zichitha ixesha elininzi emazantsi e-aquarium kwaye, ukuba sibeka ubume obuhle njengegrabile, ziya kulungelelana ngcono kwaye iya kuthintela ukonzakala kweentente.
Amanzi kufuneka ahlale ecocekile kwaye eneoksijini elungileyo. Ngale nto, inkqubo yokuhluza kufuneka ilungile ukuba sifuna ukuqinisekisa ukusinda kwayo.
Kunzima ukuchaza uhlobo lokuvelisa kwakhona ekuthinjweni, kuba akukho datha ichanekileyo. Endle, kuyaziwa ukuba ukuzala kwabo kuyinto ye-oviparous kwaye amanye amaqela ebesoloko egxile ekunyamekeleni inzala ngokuhamba kunye neoksijini. ICatfish ngokubanzi zakha iindlwane kwaye abazali bazo bayawahoya amaqanda.
Eyona catfish ilungileyo kwi-aquarium yakho kunye nexabiso
Kuba kukho inani elikhulu leekati, kunzima ukubona ukuba zeziphi ezizezona zilungileyo kwi-aquarium yakho. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo ubungakanani betanki lakho leentlanzi xa ukhetha enye okanye enye. Ukuba itanki lakho leentlanzi lincinci, eyona ifanelekileyo zii-callctids, kuba azithandi ukukhula zinkulu kakhulu, ziyasebenza kwaye zihlala emazantsi amaxesha amaninzi.
Kwelinye icala, une-aquarium enkulu, ezona zilungileyo zi-plecostomus, kuba zikhulu kwaye zinobuhle obumangalisayo, nangona zihamba ebusuku. Ukugcinwa kwazo kulula kwaye ziyahambelana nezinye iintlanzi ezikwi-aquarium.
Kulabo bafuna ukufumana «ookrebe abancinci» kukho icebisa usapho lakwaPangasiidae. Iimpawu zazo ze-phenotype zibenza bafanane nookrebe abancinci, ke uya kuzuza kwinto yokuhombisa. Ewe, itanki leentlanzi elinamandla liyadingeka ngenxa yobukhulu obukhulu abanokufikelela kubo.
Ukunyusa umbala wetanki yakho yentlanzi ungakhetha ezo zeentsapho zePseudopimelodidae. Bamele imivimbo yabo eorenji kunye emnyama. Zaziwa njenge-bee catfish.
Amaxabiso eCatfish aqala ukusuka i-5 kunye nee-euro ezingama-15 iyunithi.
Ngolu lwazi unokuyinyamekela ngokufanelekileyo i-catfish yakho kwaye ube netanki leentlanzi eligcwele iintlobo ezinomdla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yekati
Izimvo ezi-2, shiya ezakho
yenzayo 2 iminyaka
iphepha elimnandi landinceda kakhulu.
yenzayo 1 ngonyaka
Eli phepha lihle kakhulu, lindincede kakhulu, ndingacebisa ngokwenene.